Mayelana NATHI - Beijing Yiling Chenfei Technology Co., Ltd.
Ukudlayasungulwa ngoFebhuwari 2017. Njengamanje sinezimboni ezimbili ngokulandelana ezise-Yongkang city nase-Ningbo idolobha lase-Zhejiang esifundazweni, ezinemigqa yokukhiqiza ngokulandelana yama-trampolines, ama-easels wezingane, amabhayisikili wokulinganisela, uthango lwezingane namatende wezingane. Imikhiqizo yethu ifaka i-LBLA, Arkmido, BeeBeeRun njalonjalo. Le nkampani igxile ebhizinisini laphesheya kwemikhiqizo yamaShayina yabomama neyentsana kanye nokukhiqizwa kwamathoyizi emakethe yomhlaba. Kuze kube manje, iqembu le-Ealing lisungule izinkampani eziningi ezingaphansi kwazo ezifuywayo kanye nase-United States naseNdiya. Ibhizinisi lethu lalihlanganisa iNyakatho Melika, amazwe aseYurophu, India, Middle East nezinye izimakethe.
Siphinde saqonda ukuxhumana okugcwele kocwaningo lomkhiqizo olusenyakatho nentuthuko, amafektri kanye nokugcinwa okuzakhelekayo okuzakhele kanye nokuzilawula kokulawulwa kwemikhiqizo yomama nengane namathoyizi. Yamukela wonke amaklayenti nabalingani bebhizinisi emhlabeni wonke!
U-Ealing ubuye agxile ebhizinisini laphesheya kwemikhiqizo yamaShayina yabomama nabantwana namathoyizi akhiqizwa emakethe yomhlaba. Sibonile ukuxhumana okuphelele kocwaningo lomkhiqizo olusenyakatho nentuthuko, amafektri kanye nendawo yokugcina izimpahla ezakhelwe phansi kanye nokuzilawula kokulawulwa kwemikhiqizo yabomama nengane namathoyizi, ngakho-ke sinamandla aqinile okuqinisekisa intengo enhle, ikhwalithi ephezulu, isikhathi esifushane sokukhiqiza kanye nokusetshenziswa okusheshayo !
Imikhiqizo yethu izinzile, iphephile futhi inemvelo, ebithumela eMelika, eYurophu, e-Asia nakwamanye amazwe amaningi kanye nezifunda. Ngokuya komkhiqizo omusha nokwenziwa kwamakhasimende ngokwezifiso, izindinganiso zethu zekhwalithi ephezulu kanye nokuphendula okusheshayo kuye kwabonwa ngazwi linye ngamakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe. Ngomoya wokuqamba okuqhubekayo, imiqondo yokuphatha esezingeni eliphakeme, kanye nezinhlelo ezisebenza kahle neziphelele zokusatshalaliswa, i-Ealing ikhula ngokushesha okukhulu ngekusasa eliqhakazile. Yamukela wonke amaklayenti nabalingani bebhizinisi emhlabeni wonke!